China Soda Ash Ukwenziwa kunye Factory | Isihloko
Igama Product: SODA ASH
Amagama aqhelekileyo eKhemikhali: I-Soda Ash, iSodium Carbonate
Usapho lweekhemikhali: Alkali
Inombolo ye-CAS: 497-19-6
Ukuxinana kobuninzi: i-60 lbs / iinyawo zetyhubhu
Indawo yokubilisa: 854ºC
Unyibilikiso emanzini: 17 g / 100 g H2O ngama-25ºC
Ukunyibilika emanzini: 17 g / 100 g H2O kwi25 atC
Isodium carbonate yimpuphu emhlophe engenantsimbi okanye amasuntswana kubushushu begumbi.Ngokufunxwa kwamanzi, okuvezwe emoyeni ngokuthe ngcembe ukufunxa amanzi e-1mol / L (malunga ne-15%).·H2O, Na2CO3·7H2O kunye neNa2CO3·10H2O.
Isodium carbonate inyibilika ngokulula emanzini kunye neglycerin.
Isisombululo esinamanzi se-sodium carbonate sine-alkaline kwaye sonakalisa ukuya kwinqanaba elithile, kwaye sinokuphinda kabini ukubola kunye ne-asidi, kodwa kunye netyuwa ye-calcium, ityuwa ye-barium kabini ukubola ukusabela. Isisombululo yi-alkaline kwaye sinokujika i-phenolphthalein ebomvu.
Uzinzo olomeleleyo, kodwa lunokubola kubushushu obuphezulu, ukuvelisa i-sodium oxide kunye ne-carbon dioxide; Ukuhlala ixesha elide emoyeni kunokubangela ukufuma kunye nekhabhon dayoksayidi emoyeni, kuvelise i-bicarbonate yesodiyam, kwaye yenze ibhloko eqinileyo.
Ngenxa yokuba i-sodium carbonate i-hydrolyzed in aqueous solution, ion ion carbonate ion idibanisa kunye ne-hydrogen ions emanzini ukwenza i-bicarbonate ion, ekhokelela ekunciphiseni ion ye-hydrogen kwisisombululo, ishiya ion ion ihydroxide ion, ngoko i-pH yesisombululo i-alkaline .
Isodium carbonate iphendula nazo zonke iintlobo zeeacidi, Thatha ihydrochloric acid, umzekelo. Ubungakanani obaneleyo be-sodium chloride kunye ne-carbonic acid zenziwa, kwaye i-carbonic acid engazinzanga ichithwa ngokukhawuleza ibe yi-carbon dioxide kunye namanzi.
Isodium carbonate inokuphinda kabini ukubola nge-calcium hydroxide, i-barium hydroxide kunye nezinye iziseko zokwenza i-precipitate kunye ne-sodium hydroxide.Le mpendulo iqhele ukusetyenziswa kumzi-mveliso ukulungiselela i-caustic soda.
Isodium carbonate inokuphinda kabini ukubola ngetyuwa ye-calcium, ityuwa ye-barium, njl., Ukuvelisa imvula kunye netyuwa entsha yesodium:
Umba Isalathiso (Isoda Ash Dense ) Isalathiso (Ukukhanya kwesoda Ash)
Iyonke ialkali (iqhezu lomgangatho weNa2CO3 isiseko esomileyo) 99.2% imiz 99.2% imiz
I-NaCI (iqhezu lekhwalithi ye-NaCI eyomileyo) Ubuninzi be-0.70% Ubuninzi be-0.70%
Iqhezu Fe umgangatho (isiseko owomileyo) Ubuninzi be-0.0035% Ubuninzi be-0.0035%
I-Sulphate (iqhezu lomgangatho we-SO4 isiseko esomileyo) 0.03% ubuninzi 0.03% ubuninzi
Into ekhawulezayo yamanzi kwiziqwengana ezisemgangathweni 0.03% ubuninzi 0.03% ubuninzi
Ukuxinana kokuxinana (g / ml) 0.90% imiz
Ubungakanani be Particle, 180μm intsalela yentsalela 70.0% min
Ukulungiswa kwesoda Ash
Zimbini iintlobo zendlela ye-Ammonia Alkaline kunye nendlela edibeneyo yeAlkaline. 1)Indlela ye-ammonia yealkali
Yenye yeendlela eziphambili kwimveliso yezorhwebo yeSoda Ash .Iphawulwa ngezithako ezingabizi kakhulu, ukufumaneka ngokulula kunye nokurisayikilisha kwe-ammonia (ilahleko encinci; Ifanelekile kwimveliso yobuninzi, kulula ukuyenza ngoomatshini kunye nokuzenzekelayo). Le ndlela isezantsi, ngakumbi inqanaba le-NaCl. Iinkqubo eziphambili zemveliso zibandakanya ukulungiswa kwe-brine, ukubalwa kwelitye lekalika, ukulungiswa kwe-ammonia brine, i-carbonation, ukwahlula kunye nokubala i-alkali enzima, ukubuyiswa kwe-ammonia, njl.
CaCO3 ＝I-CaO + CO2 ↑－Q
ICaO + H2O = Ca (OH) 2＋Q
I-NaCl + NH3 + H2O + CO2＝NaHCO3 ↓ + NH4Cl＋Q
2) CIdibene Aindlela ye-lkaline
Ityuwa, i-ammonia kunye ne-carbon dioxide yimveliso ye-synthetic ammonia njengemveliso ekrwada, imveliso ngaxeshanye yesoda ash kunye ne-ammonium chloride, oko kukuthi, imveliso edibeneyo yesoda ash kunye ne-ammonium chloride, ebizwa ngokuba "yimveliso yealkali edibeneyo" okanye "idibeneyo Indlela ephezulu yokusabela yile:
* Ngokwamaxesha okongeza izinto ezingasetyenziswanga kunye nobushushu obahlukeneyo bokuphakama kwemvula ye-ammonium chloride, zininzi iinkqubo zemveliso yealkali edibeneyo. Ilizwe lethu lisebenzisa ikakhulu: ixesha elinye lokuthambisa, ukuphindisela kabini i-ammonia, ityuwa enye, inkqubo yeqondo lobushushu eliphantsi.
1)Umzi-mveliso weglasi lisebe elikhulu lokusetyenziswa kwesoda soda, itoni nganye yokusetyenziswa kweglasi ye-0.2t yesoda yesoda. Ikakhulu kusetyenziswa iglasi edadayo, umfanekiso ityhubhu yeglasi iqokobhe, iglasi enombala, njl
2) Ingasetyenziswa nakwimizi-mveliso yamachiza, isinyithi kunye namanye amasebe .Ukusetyenziswa kwesoda enzima kunokunciphisa uthuli lwealkali, ukunciphisa ukusetyenziswa kwezinto zokwenza imveliso, ukuphucula iimeko zokusebenza, ukuphucula umgangatho weemveliso, ukunciphisa ukhukuliseko lwealkali ipowder kwizixhobo ezichasayo, kunye nokwandisa ubomi benkonzo.
3)Njenge-buffer, i-neutralizer kunye nophuculo lwentlama, inokusetyenziselwa iikeyiki kunye nokutya kwepasta, ngokweemfuno zemveliso yokusetyenziswa okufanelekileyo.
4) Isetyenziswa njengesicocisi sokucoca uboya, iityuwa zebhafu kunye neyeza, njengealkali kulusu lokususa.
5) Isetyenziswa kwishishini lokutya, njenge-neutralizer, iarhente enegwele, enje ngokuveliswa kweeamino acid, isosi yesosi kunye nokutya kwe-noodle okunje ngesonka esine-steamed, isonka, njl njl. I-carbonate ye-sodium ingasetyenziselwa ukuvelisa i-monosodium glutamate.
6) Isenzo esikhethekileyo sombala weTV
7) Isetyenziswe kwishishini lokuxuba amayeza njenge-acid antidote kunye ne-osmotic laxative.
8) Anhydrous sodium carbonate isetyenziselwa ukususwa kweoyile yemichiza kunye ne-electrochemical, i-electroless plating, i-aluminium, i-aluminium, i-aluminium kunye ne-alloy electropolishing, i-aluminium i-oxidation ye-oxidation, i-phosphating emva kokuvala, inkqubo yokuthintela umhlwa, ukususwa kwe-chromium kunye nokususwa kwefilimu ye-chromium oxide. kwizingxobo zangaphambi kobhedu, isinyithi sentsimbi, i-alloy electrolyte yentsimbi
9) Umzi mveliso we-Metallurgical for smelting flux, ukuqhubekiswa kwezimbiwa ngearhente yokuhamba, ukwenza intsimbi kunye nokunyibilikisa i-antimony njenge-desulfurizer.
10) Ishishini lokuprinta kunye nokudaya elisetyenziselwa ukuthambisa amanzi.
11) Isetyenziselwa umzi mveliso wesikhumba ukunciphisa isikhumba esiluhlaza, ukunciphisa isikhumba sokushenxisa i-chrome kunye nokuphucula i-alkalinity yotywala bokusula i-chrome.
Ishumi elinambini) Isalathiso sokulinganiswa kwe-asidi kuhlalutyo lobungakanani.Ukuzimisela kweAluminiyam, isalfure, ubhedu, ilothe kunye ne-zinc.Umvavanyo kunye novavanyo lweglucose yegazi.Uhlalutyo lwe-silica cosolvent kwisamente. Uhlalutyo lwe-metallic metallographic, njl.
Ingcaciso ngokubanzi yokupakisha: 25KG, 50KG; 500KG; 1000KG Jumbo Bag;
Ubungakanani bePakethe: Ubungakanani bengxowa yeJumbo: 95 * 95 * 125-110 * 110 * 130；
Zonke iibhegi zokupakisha ziyi-PP ibhegi yangaphandle ene-PE ibhegi yangaphakathi;
Ingxowa yangaphandle ineengubo zokukhusela umgangatho wempahla;
Isingxobo seJumbo esinento yokhuseleko 5: 1, sinokuhlangabezana nazo zonke iintlobo zothutho lomgama omde.
Yangaphakathi / 20'fcl
Isoda Ash ukukhanya 21.5MT 22MT 15MT 20MT 2FCL
Isoda Ash Dense 27MT 27MT 27MT 2FCL
Unamava angaphezulu kweminyaka eli-10 yobungcali kwimveliso yeBarium Chloride;
Egqithileyo I-Potassium Bromide
Okulandelayo: Isodium Bicarbonate
Isisombululo seCalcium Bromide, IHydrosulfite De Sodium, Ulwelo lweCalcium Bromide, Natrium Hydrosulfite, Calcium Bromide Anhydrous, IHydrosulfite,